Guddi Issimo ah oo ka kooban 15 oo loo saaray colaadii Galkacyo. – Radio Daljir
Seteembar 11, 2011 12:00 b 0
Galkacyo, Sept 11 – Issimada Puntland iyo kuwa beesha Daarood ayaa maanta shirweyne looga arrinsanayo xaalada magaalada Galkacyo ku yeesheen isla magaalada; shirkaasi ayaa ahaa mid Issimada u gaar ah waxaana Issimadu ka soo saareen gudi Issimo ah oo loo xil saaray xalinta xurgufta gobolka Mudug.
Gudiga Issimadu doorteen ayaa ka kooban 15 Issim oo kal kala yimid gobolada Nugaal, Bari, Karkaar, Sool, Cayn, Sanaag, Mudug & Galguduud; waxaana Issimadaasi loo xil saaray xallinta mashaakilaadkii dhawaan ka dhacay magaalada Galkacyo.
Shirka Issimada oo aan loo ogolayn saxaafada iyo shacabka ayaa waxaa la soo afmeeray 2-dii duhurnimo ee maanta, halkaasi lagu shaaciyey xubnaha Guddiga Issimada ee loo igmaday soo afmeerida colaada Galkacyo.
Garaad Saleebaan Buraale Adam oo ka mid ah Issimada gobolka Cayn, kana mid ah guddiga Issimada ayaa Radio Daljir uga warramay shirka maanta ay Issimadu yeesheen iyo waxa u qabsoomay ergooyinka nabadeed mudadii ay ku sugnaayeen Galakcyo; Garaadku wuxuu shaaca ka qaaday in ergooyinku guul lataaban karo ay ka gaareen dejinta colaadii Galkacyo, waxaaana uu tilmaamay in ay u suurtagashay kala fogaynta labadii ciidan, xabadjoojin rasmi ah, iyo dadkii barakacay oo intooda badan dib u soo laabteen.
Garaad Saleebaan Buraale ayaa sheegay in dejinta colaada ay qayb libaax ka qaateen labadii dhinac ee dagaalamay, ayna si weyn u ogolaadeen talooyinka iyo maslaxada ergooyinka nabadeed ee ku sugan gobolka Mudug.
“Reer Galkacyood waxaad moodaaba si kasta oo ay isu dilaan dad heshiin kara in ay yihiin” ayuu yiri Garaad Saleebaan.
Waxaan weli xal laga gaarin kontaroolka Kooonfureed ee magaalada oo ay hadda gacanta ku hayaan dabley beeleed la wareegay kontaroolka markii ciidamada dawlada lagu amray in ay ka baxaan xaafada Garsoor, waxaana la isku afgartay in dib loo dhigo xallinta arrintan kontaroolks.
Ergooyinka nabadeed ee ku sugan gobolka Mudug, isuguna jira Issimo, Cuqaal, Aqoon-yahano, Culima-awdiin & ururada bulshada oo ay ugu horeeyaan kuwa haweenka ayaa talaabo horumar leh ka sameeyey nabadaynta Galkacyo, waxaana xiligan saadaashu ay tahay mid aad u wanaagsan iyadoo rajadu ay u badan tahay in gacmaha la is qabsado sida dhaqanka u ah bulshada reer Puntland oo caanku ah xallinta khilaafaadka iyo waxybaaha dhexdooda mararka qaar dhaca.